ulawulo motor Stepper sisixhobo olawula sikhundla, isantya kunye torque mechanical drive. It yenzelwe ulawulo isindululo iinjini zombane. It has transmission esizenzekelayo lesandla zokuqala bokumisa injini, kunye nokukhethwa hlengiso nesantya. Kwakhona kulindeleke ukuba se ...
Motors Stepper idla microprocessors okanye ICS isiko isilawuli, namandla kudla ilawulwa kwiisekethe yalikhanyisa stepper umqhubi ngeemoto transistors namandla. intshukumo Echanekileyo kunokwenzeka, kodwa nokuphelela ngokuqhelekileyo ilizwe stepper engahlawulwayo kwi "mhlawumbi ngenye imini" iindawo bin. Kodwa stepper ...
uhamba injini Stepper ngamanyathelo ezincinane ngokubanzi ziboniswe kwileyibhile ngokwamazinga. A motor inyathelo ukujija kwenye kwicala langoku idlule coil, ngoko omnye, ngoko ke yokuqala kwemicimbi of wokwephuka esahlukileyo, ngoko ke yesibini wokwephuka umva, nazo. Le ulandelelwano iyaphindwa ukuze c ...